ယာဉ်ပိုင်ရှင်များ၏အာရုံစူးစိုက်မှု။ .. တနင်္ဂနွေနေ့၊ 81 ခရိုင်၊ ရေဒါမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှု | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီကားပိုင်ရှင်များ၏အာရုံစူးစိုက်မှု! .. ပြည်နယ်ရှိရှိ 81၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊
11 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနလုံခြုံရေးအထွေထွေညွှန်ကြားမှု 81 ပြည်နယ်ရဲဌာန၊ Gendarmerie အထွေထွေစစ်ဌာနချုပ်၊ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအထွေထွေညွှန်ကြားမှု၊ EGM Special Pen Directorate မှရေဒါအားညွှန်ကြားချက်များကိုပေးပို့လိမ့်မည်။
ဘုံယာဉ်ကြောထိန်းချုပ်မှုများမှတဆင့်ချိုးဖောက်မှုများကိုလျှော့ချပါ။ ကမ္ဘာအနှံ့ယာဉ်အသွားအလာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက်အခြေခံနိယာမကိုလက်ခံပြီး၊ ယာဉ်ထိန်းထိန်းချုပ်မှုများကိုထိထိရောက်ရောက်မပြုလုပ်သောအခါစည်းမျဉ်းများ၊ အထူးသဖြင့်လျင်မြန်စွာမောင်းနှင်မှုများ၊
2019 ၏ပထမ ဦး ဆုံး 8 လအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သောယာဉ်တိုက်မှုနှင့်သေဆုံးမှုများကိုစစ်ဆေးသည့်အခါ 9636 ၏အကြောင်းပြချက်သည်အမြန်နှုန်းစည်းမျဉ်းကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးမတော်တဆမှုအများစုသည်“ တစ် ဦး တည်းမော်တော်ယာဉ်၊ မြန်နှုန်းနှင့်သတိမဲ့မှု” ဖြစ်သည်။
ယာဉ်စည်းကမ်းများ၊ တားမြစ်ချက်များနှင့်ကန့်သတ်ချက်များအရယာဉ်မောင်းသူများအားမောင်းနှင်ရန်ညွှန်ကြားရန်၊ အမြန်နှုန်းချိုးဖောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောယာဉ်မတော်တဆမှုများကိုတားဆီးရန်နှင့်မတော်တဆမှုကြောင့်အသက်နှင့်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချရန်ယာဉ်အသွားအလာအမိန့်နှင့်လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်။ 12-13 အောက်တိုဘာလ 2019 တွင်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့်ဒေသဆိုင်ရာအသွားအလာယူနစ်များတွင်ရေဒါယာဉ်များအားလုံးပါဝင်သော“ 08.30-10.00, 11.00-12.30 နှင့် 14.30-16.30” နာရီ။ စုစုပေါင်း 10 နာရီ၊ K3-Radar olarak နှင့်အတူ Yap Speed ​​Control အတွက်အထူးစစ်ဆေးခြင်းကိုပြောင်းလဲရေးအဖွဲ့နှင့်အတူဆောင်ရွက်မည်။ ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်;
3) UTP ကိုစစ်ဆေးပြီးယူနစ်ကြီးကြပ်ရေးမှူးများနောက်မှလိုက်ရမည်။
4) ဆောင်ရွက်မည့်စစ်ဆေးမှုများတွင် UTP မှရေဒါမြန်နှုန်းကိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုကိုအသိပေး / ဘာသာပြန်အဖွဲ့တစ်ခုစီရှိစစ်ဆေးမှုအဆုံးတွင်အဆုံးသတ်ရမည်။ ဤပြissuesနာများကို UTP စနစ်ဖြင့်ဗဟိုစောင့်ကြည့်လိမ့်မည်။
5) ရလဒ်ပုံစံတွင်စုစုပေါင်းရေဒါ၊ တက်ကြွသောရေဒါနှင့် Non-Radar ရေဒါနံပါတ်များကိုထည့်သွင်းအတည်ပြုရမည်။
6) ယာဉ်စစ်ဆေးမှုနှင့်ယာဉ်တိုက်မှုများတွင်ပါ ၀ င်ရမည့်ဆောင်ရွက်ချက်များဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်တွင်လိုအပ်သောယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများကိုပြုလုပ်ပြီးယာဉ်များ / ယာဉ်မောင်းများ၏ထိန်းချုပ်မှုကိုသေချာစေရမည်။
8) စာရင်းစစ်၏ရလဒ်များကိုနိုင်ငံတော် / လူမှုမီဒီယာများမှတဆင့်အများပြည်သူအားဝေမျှသည့်အခါ withorum၊ Mersin, İstanbulနှင့်Kırıkkale၏စီရင်စုအသွားအလာယူနစ်များမှနမူနာနှင့်ပုံနှိပ်ထားသောပုံရိပ်များ (ဓာတ်ပုံများ) သည်စာရင်းစစ်ရလဒ်နှင့်အတူပေးပို့လိမ့်မည်။
အဆိုပါမော်တော်ယာဉ်အချိန်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းစောင့်ရှောက်မှုယူပြီးထားပြီး 29 / 09 / 2014 သတိထားမိသည့်ကာလအတွင်းယာဉ်ကိုစစ်ဆေးခြင်းမပြုရသေးသောယာဉ်ပိုင်ရှင်များမှာ - အလုပ်သမားဥပဒေနှင့်အချို့သောဥပဒေများ၊ အမိန့်ဥပဒေများနှင့်အချို့သောလက်ခံရရှိမှုများကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ၏ 79 အပိုဒ်၏လျှောက်လွှာအပေါ်Communiqué
မော်တော်ကားပိုင်ရှင်များသတိနှင့်ကြဉ်ရှောင် 11 / 12 / 2014 ယာဉ်ပိုင်ရှင်များကသတိပြုမိသည်။ ကားပိုင်ရှင်ထောင်ပေါင်းများစွာတို့သည်ကားလမ်းနှင့်တံတားဖြတ်သန်းရာတွင်ကဒ်မရှိသောသို့မဟုတ်မလုံလောက်သောသို့မဟုတ်ချို့ယွင်းချက်မျှတမှုမရှိသောယာဉ်ပိုင်ရှင်များသည် 2013 yılတွင်ရှိသည်။
ETC ပိုင်ရှင်များသတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်! ငှားရမ်းဖယ်ထုတ်လို့ရပါတယ် 12 / 06 / 2014 OGS ပိုင်ရှင်များကသတိထားပါ! ငွေချေးယူသူသည်ထွက်နိုင်သည် - ဘဏ်များသည်ရန်ပုံငွေမလုံလောက်သော OGS ပစ္စည်းများကိုဘဏ်များမှပယ်ဖျက်ရန်သည်မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်များကိုများစွာပေါက်ကွဲစေနိုင်သည်။ 500 TL နှင့်2ထောင်ပေါင်းများစွာ TL အကြား crossover လုပ်ပြီဟုယူဆသောယာဉ်မောင်းများ…
Ilgaz အတွက် Kartalkaya နှင့်တနင်္ဂနွေသိပ်သည်းဆ 03 / 03 / 2014 Kartalkaya နှင့် Ilgaz ရှိတနင်္ဂနွေအားလပ်ရက်များ - တနင်္ဂနွေအားလပ်ရက်အတွင်းပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားခရီးသွားများသည် Ilgaz နှင့် Kartalkaya နှင်းလျှောစီးစင်တာများသို့စုရုံးရောက်ရှိလာကြသည်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေအတွင်းပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပခရီးသွားများဖြစ်သော Ilgaz နှင့် Kartalkaya …
ညျ့နင်္ဂနွေပိတ်ရက်များတွင် Erciyes နှင်းလျှောစီးရေးစင်တာ 02 / 12 / 2014 Weekend များစွာသော Erciyes နှင်းလျှောစီးစင်တာ Erciyes နှင်းလျှောစီး Center ကနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းအတွင်းပထမဆုံးတနင်္ဂနွေတူရကီအတွက်နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းအတွက်ရာသီအကြီးအပြင်းထန်မှုကြုံတွေ့လျက်ရှိသည်ဖွင့်လှစ်။ မကြာသေးမီကgünlerနှင်းကျခြင်းနှင့်အတူ
ETC ပိုင်ရှင်များသတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်! ငှားရမ်းဖယ်ထုတ်လို့ရပါတယ်
Ilgaz အတွက် Kartalkaya နှင့်တနင်္ဂနွေသိပ်သည်းဆ
တနင်္ဂနွေသိပ်သည်းဆအတွက် Kartepe နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း ''
တနင်္ဂနွေသိပ်သည်းဆအပေါ် Atabar နှင်းလျှောစီးရေးစင်တာ
တနင်္ဂနွေသိပ်သည်းဆအတွက် Cibiltepe နှင်းလျှောစီး Resorts ''
Weekend Density ကနေ Cibiltepe